ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်အနုပညာရှင်များနှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံမည်
သမ္မတသက်တမ်း သုံး နှစ်ကျော်အတွင်း ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်၊ အနုပညာနယ်ပယ်အသီးသီးမှ အနုပညာရှင်များနှင့် ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ဇူ လိုင် ၁၂ ရက်တွင် အနုပညာရှင် များနှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သည့် ခြောက်လခန့် ကတည်းက အနုပညာအသိုင်း အ၀ိုင်းက သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့် တောင်းထားသော် လည်း မည်သို့မျှ အကြောင်းမ ပြန်ခဲ့ပေ။ ယခုအမျိုးသားဒီမိုက ရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဦးဆောင် လှုပ်ရှားနေသည့် ပုဒ်မ ၄၃၆ လက်မှတ်ရေးထိုးမှုများ အရှိန်မြင့်လာ ချိန်တွင်မှ သမ္မတက တွေ့ဆုံရန် အကြောင်းပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သရုပ်ဆောင်ဇာဂနာက ဆို သည်။
‘‘ဒီမနက်မှာ သမ္မတက နောက်အပတ် စနေနေ့ (ဇူလိုင် ၁၂)မှာ တွေ့ခွင့်ပြုမယ်လို့ ပြော ပါတယ်။ ကိုလူမင်းတို့ဆို သုံးလပိုင်းကတည်းက စာတင်ထားတာ။ တွေ့မယ့်တွေ့တော့ ရုပ်ရှင်တစ် ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ ဂီတနဲ့ သဘင်ကိုပါ တွေ့ဖို့စီစဉ်လိုက်တာ။ သမ္မတတက်လာပြီးတည်းက အနုပညာသမားတွေဟာ အခက်အခဲတွေ၊ ပြောချင်တာတွေတစ် ခုမှ တွေ့ပြီး ပြောခွင့်မရသေးဘူး။ အခု ၄၃၆ ကိစ္စကလည်း ရှိနေတော့ကဲ . . . မင်းတို့ဘာရင်ဖွင့်ကြမလဲ ဆိုပြီး သူ့ဘက်ဆွဲခေါ်ချင်လို့ တွေ့ ခွင့်ပေးတာလို့ ကျွန်တော်ထင် တယ်’’ဟု ဇာဂနာကပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဝင်းနှင့် မြန်မာ့ငြိမ်း ချမ်းရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဗဟိုဌာန (MPC) နှစ်နေရာအနက် အဆင်ပြေသည့် နေရာတွင် တွေ့ ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရသစ် လက်ထက်အ တွင်း ရုပ်ရှင်၊ ဂီတ၊ သဘင်အနုပ ညာရှင်များသည် အမျိုးသားဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ၎င်း၏ အိမ်ခြံဝင်းအတွင်း နှစ်ကြိမ်ခန့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ဆန္ဒရှိသည့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးရန်ပုံငွေ ဖျော်ဖြေပွဲများတွင် အနုပညာရှင် များက၀န်းရံခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့် ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင် ဆင်ရေး လက်မှတ်ရေးထိုးလှုပ် ရှားမှုတွင် အနုပညာရှင်များ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ပုံရိပ်များ အွန်လိုင်း စာမျက်နှာများ တွင် နေရာယူခဲ့ပြီး လက်မှတ်ရေး ထိုးသူပေါင်း သုံးသန်းကျော်ရရှိ ထားသည်ဟု NLD က ထုတ်ပြန် လိုက်ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ရန်ကုန်တွင် အနုပညာရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က နောက် ဆုံးထုတ်ပြန်သည့် နိုင်ငံပေါင်း နှစ်ရာကျော်ပါဝင်သော ကမ္ဘာ့အ ချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံများစာရင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံက အောက်ဆုံး ၁၂ နိုင်ငံ၌ ပါဝင်ရပ်တည်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၂၁၅ နိုင်ငံ ပါဝင်သောစာရင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ က အောက်ခြေမှစ၍ ရေတွက် လျှင် အဆင့် ၁၂ နေရာ၌ ရပ် တည်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်း အာဆီယံနိုင်ငံများတွင် အောက် ဆုံးရောက်ရှိနေကြောင်း အဆိုပါ စာရင်း၌ ဖော်ပြသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်က တစ်နိုင်ငံ လုံး၏ အသားတင်ထုတ်လုပ်မှု နှင့် ၀န်ဆောင်မှုတန်ဖိုးကို နိုင်ငံ့လူဦးရေနှင့် အချိုးကျ တွက်ချက်သောနည်း (GDP per ca-pital) ဖြင့် တွက်ချက်ထားသည့် စာရင်း၌ ဒေသတွင်း ဒုတိယ အဆင်းရဲဆုံးဖြစ်သော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကြားတွင် အဆင့်ငါးဆယ်ကွာခြားနေပြီး အီသီယိုးပီးယား၊ ကျူးဘား၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ ဆိုမာလီယာ စသည့်နိုင်ငံတို့က မြန်မာနိုင်ငံ အထက်တွင် ရပ်တည်နေသည်။
‘‘အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ လည်း ဘာမှပြောင်းလဲ မလာဘူး။ အားမနာတမ်းပြောရရင် ပိုဆိုး လာသလိုပဲ။ လှိုင်သာယာလို နေ ရာမျိုးသွားကြည့်ရင် အလုပ်သ မားတွေ အလုပ်ရဖို့ ထိုင်စောင့်နေ ကြတယ်။ နေ့စားအလုပ်သမား တွေ အရမ်းပိုများလာတယ်။ အဲ ဒါကောင်းတဲ့ လက္ခဏာမဟုတ် ဘူး။ အဓိက အချက်ကတော့ ပညာရေးနိမ့်ကျသွားတဲ့အတွက် တိုင်းပြည်နိမ့်ကျသွားတာပါပဲ’’ ဟု စီးပွားရေးအကြံပေးပညာရှင် ဦးရဲမြင့် (စွန့်ဦးတီထွင်) က ပြောကြားသည်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ် စဉ် GDP သည် ၂၀၁၀ပြည့်နှစ်မှစ၍ မြင့်တက်လာခဲ့သော်လည်း ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထိ တိုးတက်ကြီးထွားမှု အတက်၊ အကျမရှိ ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်တည်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်က သုံးသပ်ထားသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ စီးပွား ရေးနှင့် လူမှုရေးအကြံပေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးမြင့်က မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်အထိ ၀င်ငွေနိမ့်ကျသော နိုင်ငံများစာရင်းတွင် ပါဝင်နေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာက မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ်တွင် ကျင်းပသော ဆွေးနွေးပွဲ၌ ပြောကြားထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံသား များ၏ တစ်ဦးချင်း အသားတင် ထုတ်လုပ်နိုင်မှုသည် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများထက် နိမ့်ကျနေသကဲ့သို့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ တွင်လည်း အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ထက် လျော့ကျနေသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ကမ္ဘာ့အချမ်း သာဆုံး ထိပ်တန်းနိုင်ငံများနေရာ တွင် လူဇင်ဘတ်၊ နော်ဝေး၊ ကာတာ၊ မကာအို၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ သြစတြေးလျ၊ ဒိန်းမတ်၊ ဆွီဒင်၊ စင်ကာပူ၊ အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါနိုင်ငံတို့က အစဉ်အတိုင်း ရပ်တည်နေသည်။
ရဲရင့်မင်းခန့်၊ ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင်-၅
မော်ဒယ်လ်၊ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူ၊ ဇာတ်လမ်းတွဲလည်း ရိုက်ကူး နေတဲ့ အေးချမ်းမိုးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့
မိန်းမတစ်ယောက် အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
'အစ်မက ဇာတ်လမ်းတိုတွေမှာ သရုပ်ဆောင်ဖူးတယ်။ ပညာပေး
ကားတွေသရုပ်ဆောင်ဖူးတယ်။ သရုပ်ဆောင်မှုတိုင်းတော့ ကိုယ့်
ကိုယ်ကိုယ် အားရတယ်လို့မရှိပါဘူး။ သင်ယူမှုတွေအများကြီး လိုသေးတယ်။အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးလိုသေးတယ်'
လို့ သူကဆိုပါတယ်။ သရုပ် ဆောင်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အေးချမ်းမိုးက လက်ရှိမှာတော့ကျောင်းတက် ရင်း တခြားအနုပညာနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေ လုပ်နေပါတယ်။
'အစ်မ အခုလက်ရှိကတော့ ကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ အစီအစဉ်တင် ဆက်သူအဖြစ်လုပ်နေတယ်။နောက်ပြီး မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်တွေအတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနေတယ်။ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း
ကတော့ အစ်မဆရာမတီချယ်မိုးက ဒီလောကထဲကို ဆွဲခေါ်လာတာပါ'ဟု
မော်ဒယ်လ်သရုပ်ဆောင် အေးချမ်းမိုးက ပြောသည်။
အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ် သင်တန်းတက်ထားတာမရှိပေမယ့် မတင်မိုး
လွင်ရဲ့သင်ပြမှုတွေနဲ့ ဆက်လုပ်ဖြစ်တာလို့ဆိုပါတယ်။ အနုပညာ အလုပ်
တွေက သူ့အတွက်တော့ ခက်ခက်ခဲခဲကျော်ဖြတ်ရတဲ့ အဆင့်တွေ ဖြစ်တယ်
'အစ်မမော်ဒယ်လ်အလုပ်လုပ်ချင်တုန်းကလည်း မော်ဒယ်လ် အလုပ်က အရမ်းခက်ခဲတယ်။ Miss ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ပြိုင်တဲ့အခါ အဆင်မပြေဘူး။ ကိုယ့်မှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ ပြင်ရင်းပြင်ရင်းနဲ့နောက်ပိုင်း Miss ဆုတွေရ လာတယ်'လို့ ဆိုပါတယ်။ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်လာဖို့ကလည်း
သူ့အတွက် အတော်လေးကြိုးစားခဲ့ရတယ်လို့ အေးချမ်းမိုးက
မန္တလေးမြို့အခြေအနေ ပြန်လည်တည်ငြိမ်စပြု ၁၆ ဦးကို ဖမ်းဆီးထားသော်လည်း လူသတ်မှု ကျူးလွန်သူများ ဖမ်းမမိသေး
ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခအသွင် အုပ်စုဖွဲ့အကြမ်း ဖက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသော မန္တလေးမြို့တွင် ဇူလိုင် ၄ ရက်ည မှစ၍ အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွား မှုမရှိတော့ဘဲ ပြန်လည်တည်ငြိမ် စပြုလာပြီဖြစ်သည်။
ဇူလိုင် ၄ ရက်ညမှ စတင် ၍ ဇူလိုင် ၅ ရက် တစ်ရက်လုံး အုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်သည့် ထူး ခြားဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားမှုမရှိတော့ ဘဲ အခြေအနေ ပြန်လည်တည်ငြိမ်စပြုလာပြီဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
‘‘အခုလက်ရှိအနေအထား အတိုင်း ပြောပါမယ်။ ဒါ ကျွန် တော်တို့ ရရှိထားတဲ့ အခြေအနေ ကတော့ ထိန်းနိုင်တယ်လို့ ယူဆ လို့ရပါတယ်’’ ဟု မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်က ပြောသည်။
ဇူလိုင် ၅ ရက် တစ်နေ့လုံး မန္တလေးမြို့တွင် အေးအေးချမ်း ချမ်းရှိနေပြီး ဈေးများ၊ ကျောင်း များ ပုံမှန်အတိုင်း ဖွင့်လှစ်ထား ကြောင်း၊ အုပ်စုဖွဲ့အကြမ်းဖက်မှု များ ဖြစ်ပွားခဲ့သော မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် အနောက် ခြမ်းရှိ နေရာများနှင့် ဈေးချိုတော် အနီးတစ်ဝိုက်တွင်လည်း အစ္စ လာမ်ဘာသာဝင်များ၏ ဈေးဆိုင် အချို့မှလွဲ၍ ပုံမှန်အတိုင်းသွား လာလှုပ်ရှားမှုများ ရှိနေသည်ဟု မြို့ခံများက ပြောသည်။
‘‘ဈေးပိတ်လိုက်ရတဲ့အထိ မဖြစ်ပေမယ့် လူက တော်တော် ကျဲသွားတယ်။ နယ်တွေကလည်း ကောလာဟလတွေကြောင့် မ လာကြဘူး။ အရင်ကတည်းက အရောင်းအဝယ်အေးနေတာ။ အ ခုလို ဖြစ်လိုက်တော့ ပိုဆိုးသွား တယ်။ ဈေးချိုတော်ကတော့ အစ ကနေ ပြန်စရမယ့် အခြေအနေရှိ တယ်’’ဟု မန္တလေးဈေးချိုတော်မှ ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြော သည်။
အနည်းငယ်တည်ငြိမ်မှု ရှိ လာပြီဆိုသော်လည်း အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်အများစုမှာ စိုးရိမ်နေ ဆဲဖြစ်ပြီး အချို့မှာ ပြင်ဦးလွင်မြို့ အပါအဝင် နီးစပ်ရာမြို့များသို့ သွားရောက်နေထိုင်မှုများ ရှိနေ သည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
မန္တလေးမြို့အနှံ့တွင် ရဲတပ် ဖွဲ့ဝင်များ လုံခြုံရေးဆောင်ရွက် နေပြီး ဇူလိုင် ၃ ရက်မှစတင်ကာ မန္တလေးမြို့တွင် ည ၉ နာရီမှ နံ နက် ၅ နာရီအတွင်း ညမထွက်ရ အမိန့် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထား သည်။
ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ပုဒ်မ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း မြို့၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအပေါ် မူတည်သုံးသပ်ကာ ပြန်လည်ရုပ် သိမ်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောသည်။
ထို့အပြင် မန္တလေးပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက်၍ ၁၆ ဦးကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်းလည်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်က ပြောကြားသည်။
သို့သော်လည်း အုပ်စုဖွဲ့ လူသတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူများကိုမူ ဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
‘‘လူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးရမိခြင်း မရှိသေးပါဘူး’’ ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပြီး အုပ်စု ဖွဲ့ လူသတ်မှုကျူးလွန်သူများအား ဖြစ်နိုင်ခြေ အနေအထား၊ ဆက် စပ်သတင်းများအပေါ် အခြေခံပြီး ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် ကြိုးစား ဆဲဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။ အုပ်စု ဖွဲ့သတ်ဖြတ်ခံရသူ ကိုထွန်းထွန်း နှင့်အတူ ဆိုင်ကယ်အတူစီးပြီး အ သက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည့် ကိုထွေး (ခ) ကိုသိန်းနိုင်ထွေး မျက်မြင်သက်သေရှိသော်လည်း အ ခင်းဖြစ်ပွားပြီး သုံးရက်ကြာသည့် တိုင် တရားခံမဖော်ထုတ်နိုင်သေး ဟုဆိုသည်။
မန္တလေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်စဉ် များအပေါ် အစိုးရအဖွဲ့၏ ကိုင် တွယ်မှုနှင့် အရေးယူမှုတွင် အားနည်းချက်များစွာ ရှိနေသည် ဟု မြို့ခံအချို့က ဝေဖန်သည်။ အုပ်စုဖွဲ့ အကြမ်းဖက်သူများကို ထိ ထိရောက်ရောက် ဖမ်းဆီးအရေး ယူစေလိုကြပြီး ထိုသို့လုပ်ဆောင် မှသာ နောင်တွင် အုပ်စုဖွဲ့အ ကြမ်းဖက်မှုများ ရှောင်ကြဉ်ပြီးမြို့တည်ငြိမ်မည်ဟု မြို့ခံများက ပြောသည်။
နေ့ခင်း ကြောင်တောင် လော့ကက်မျိုးစုံ ၁၃၀ ကျော် ခိုးယူမှု ဖြစ်ပွား
ကော့ကရိတ် ဇူလိုင် ၅
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ် မြို့နယ်တွင် ဇူလိုင် ၄ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲက အမှတ် (၆)ရပ်ကွက် ဈေးကြီးလမ်းရှိ ရွှေလင်းယုန် ရွှေဆိုင်၌ ရွှေထည်ပစ္စည်းများ ခိုးယူခံရကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် စခန်းမှူး ဒုရဲမှူး မြင့်အောင်နှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇူလိုင် ၄ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် မရှုရီ(ခ) မီးမီးသည် မိသားစုပိုင် ရွှေလင်းယုန်ရွှေဆိုင်တွင် ရွှေထည် ပစ္စည်းများ ရောင်းချနေရာ အရပ်မြင့် ခန္ဓာကိုယ်ပိန်ပါး ဆံပင်ရှည် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ရောက်ရှိလာပြီး ဆွဲကြိုး လုပ်မည်ဟု ပြောရာ မရှုရီက ဆွဲကြိုး အမျိုးအစားများကို ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းအမည်မသိ အမျိုးသမီးက နားကပ်ကို ပေါင်နှံလိုကြောင်း ပြောသဖြင့် မရှုရီက အပေါင်ခံပြီး ငွေကျပ် ၃ဝဝဝဝ ပေးလိုက်ရာ ၎င်းအမျိုးသမီး ပြန်သွားခဲ့သည်။
ယင်း အမျိုးသမီး ပြန်သွားပြီးနောက် မရှုရီက ၎င်းခင်းကျင်းထားသည့် ရွှေထည် ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးရာ ရွှေထည် ပစ္စည်းများ ထည့်ထားသည့် ကော်ဘူး အဖြူရောင်မှာ ပျောက်ဆုံးနေသဖြင့် ကော့ကရိတ် မြို့နယ် ရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားခဲ့သည်။ မြို့နယ် ရဲစခန်းမှ စခန်းမှူး ဒုရဲမှူး မြင့်အောင်နှင့်အဖွဲ့က လိုက်လံစုံစမ်း ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာ နှင်းဆီအေး(ခ)လစီဒါ (၂၇နှစ်) ဘုရင့်နောင်လမ်း အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်နေသူ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းနေအိမ် ခြံဝန်းကို ရှာဖွေခဲ့ရာ နေအိမ်အောက် လွှစာမှုန့်ထဲတွင် ရွှေထည်ပစ္စည်းများ ထည့်ထားသည့် အဝတ်ထုပ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး ၎င်းအ၀တ်ထုတ်ထဲတွင် ဒေါ်ရှုရီ ပျောက်ဆုံး သွားသော ရွှေထည် ပစ္စည်းများ ဖြစ်သည့် လော့ကက် ဆိုက်စုံ ၂၈ စုံ ၂၀ ကျပ်သား ခြောက်ပဲခွဲ (တန်ဖိုးငွေကျပ် ၁၄၃၀၀၀၀)၊ လော့ကက် ပန်းခက်စုံ ၂၂ ခု နှစ်ကျပ် ၁၀ ပဲ (တန်ဖိုးငွေကျပ် ၁၅၇၅၀၀၀)၊ အသည်းပုံ ဆိုက်စုံ ၃၇ ခုနှစ်ကျပ် နှစ်ပဲ လေးရွေး (တန်ဖိုးငွေကျပ် ၁၂၉၃၀၀၀)၊ ကျောက်ဆူးဝါးပုံ လေးထောင့်ပုံ ဆိုက်စုံ ၁၉ ခု တစ်ကျပ် ခြောက်ပဲတစ်ရွေး (တန်ဖိုးငွေကျပ် ၈၃၀၀၀၀)၊ လော့ကက်ထုဝိုင်း ကြီး/ သေး ခြောက်ခု ၁၄ ပဲ ငါးရွေး (တန်ဖိုးငွေကျပ် ၅၅၀၀၀၀)၊ လော့ကက်ကြုတ် ဆိုက်စုံ ၁၄ ခု တစ်ကျပ်သား ရှစ်ပဲခြောက်ရွေး (တန်ဖိုးငွေကျပ် ၉၃၀၀၀၀)၊ လော့ကတ် ကျောက်စုံ ဆွဲပြား ၁၂ ခု နှစ်ကျပ်သား ငါးပဲသုံးရွေး (တန်ဖိုးငွေကျပ် ၁၄၀၀၀၀၀) စုစုပေါင်း ငွေကျပ် ရှစ်ဆယ့်ရှစ်သိန်းနှင့် ရှစ်ထောင် ကျပ်ဖိုးကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဆက်လက် ရှာဖွေခဲ့ရာ ရွှေထည် ပစ္စည်းများ ထည့်ထားသည့် ကော်ဘူး အဖြူရောင်အခွံကို နှင်းဆီအေး၏ အိမ်နောက်ဖေး ရေစပ်တွင် တွေ့ရှိ၍ သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကျပ် (၆၃)သိန်း တန်ဖိုးရှိ ကတ်သမျှင်ငါးတစ်ကောင် ဖမ်းဆီးရမိ
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ ကျိုက္ခမီမြို့၊ အောင်သုခရပ်ရှိ ကမ်းနီးစိန်ပိုက်လုပ်ငန်းရှင် ဦးဖေလှိုင်၏ငါးဖမ်းလှေမှ (၃-၇-၂၀၁၄)ရက်နေ့ ကျိုက္ခမီမီးပြအနီး၊ တပ်မြေမှ (၈)မိုင်ခန့်အကွာတွင်
ကမ်းနီးစိန်ပိုက် (ကက္ကူရံပိုက်) ဖြင့် တန်ဖိုးရှိကတ်သမျှင်ငါးတစ်ကောင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။
ငါး၏အရွယ်အစားမှာအလျား(၄)ပေ၊ အနံ(၁၁)လက်မရှိပြီး အလေးချိန်မှာ(၁၇)ပိဿာ (၅၀) ကျပ်သား ရှိပြီး အဆိုပါ ငါးအား အကောင်လိုက်ရောင်းချခဲ့ရာ ကျိုက္ခမီမြို့နယ်၊ အောင်သုခရပ်ကွက်နေ ဦးခင်ဝင်းမှ တန်ဖိုး ကျပ် (၆၃)သိန်းပေး၍ ၀ယ်ယူခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
အသက်(၃၄)နှစ်ရှိ ဖေဘီယန်နီ တာရဲလ်ကဲလ်မက်စ်သည် အယ်လ်ဘီမြို့ရှိ Edouard Herriot မူလတန်းကျောင်းတွင် ဇူလိုင်(၄)ရက် နံနက်ပိုင်းက တိုက်ခိုက် ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ အသက်(၄၈)နှစ်ရှိ သံသယ တရားခံကို အခင်းဖြစ်ပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း သူမ၏ နေအိမ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ရဲများက ဆိုသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီး ဘင်နွိုက်ဟေမွန်က သံသယ တရားခံ အမျိုးသမီးသည် ပြင်းထန်သော စိတ်ကစဉ့်ကလျား အခြေအနေမျိုး ကြုံနေရသည်ဟု ယူဆရကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျောင်းဆရာမ ကဲလ်မက်စ်ကို ဓားဖြင့်ထိုးရသည့် အကြောင်းရင်းကိုမူ တိတိကျကျ မသိရသေးချေ။
အဆိုပါ အမျိုးသမီးသည် အသက်(၅)နှစ်၊ သို့မဟုတ် (၆)နှစ်မျှသာ ရှိသေးသည့် သမီးဖြစ်သူကို ခေါ်ဆောင်လာကာ ကျောင်းသို့ ရောက်လာသည်။ ထို့နောက်တွင်မူ ရှည်လျားချွန်မြသည့် ဓားတစ်လက်ကို ထုတ်ကာ ကဲလ်မက်စ်အား တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သံသယ တရားခံ၏ အမည်ကိုမူ ပြင်သစ်သတင်းဌာနများက မဖော်ပြခဲ့ချေ။
ကဲလ်မက်စ် ကိုယ်တိုင်မှာလည်း ကလေးနှစ်ဦး၏ မိခင်ဖြစ်ပြီး အသက်(၅)နှစ်ဝန်းကျင် မူလတန်း ကျောင်းသူ ကျောင်းသားလေးများကို ပညာသင်ကြားပေးနေသည်။ သံသယ တရားခံ အမျိုးသမီးသည် ကဲလ်မက်စ်ကို ဓားဖြင့်မထိုးမီ “ငါက သူခိုးမဟုတ်ဘူး”ဟု စူးစူးဝါးဝါး အော်ဟစ်ခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်အချို့၏ အဆိုကို ကိုးကားပြီး သတင်းများက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ကဲလ်မက်စ်သည် ရင်ဘတ် (သို့မဟုတ်) ဝမ်းဗိုက်တွင် ထိထိမိမိ ဓားဖြင့် တစ်ချက်ထိုးခံခဲ့ရပြီး သတင်းဌာနများ၏ ဖော်ပြမှုမှာ ကွဲလွဲချက်များ ရှိနေသည်။ သံသယ တရားခံသည် သမီးငယ်ကို စောင့်ရှောက်မှုပိုင်း ပျက်ကွက်မှုများကြောင့် ရဲမှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြခံရဖူးသူ တစ်ဦးဟုလည်း သိရသည်။
ကျတော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ နည်းပညာရဲ့ အကျိုးဆက်ကို အနည်းငယ် တင်ပြပါရစေ။ အဓိက နုနယ်တဲ့ ကလေးတွေကြားမှာပေါ့။ ခေတ်ရဲ့ ရေစီးကြောင်းအရ ကျတော်တို့ အပါအ၀င်ကလေးသူငယ်တွေ တော်တော် များများဟာ အင်တာနက်၊ ဂိမ်း၊ စာရိုက်ခြင်း တွေကြားမှာ သူတို့လည်း ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျတော်တို့ ပြည်တွင်းကတော့ ကလေးတွေကြားမှာ
(ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ) တွေ့နေရတာပေါ့ဗျာ..
အဓိက ဂိမ်းဆော့လို့ မျက်စိ ပြသနာပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျတော် ကိုယ်တိုင်က ငယ်ငယ်က ဂိမ်းဆိုင်မှာပဲ အနေများလို မျက်မှန် တပ်ခဲ့ရတာ အခုထိပါ။ ပုံမှန်အရွယ်ရောက် ပြီးသား လူတွေအတွက် ကတော့ ပြသနာ ကြီးကြီးမားမား မဆိုနိင်ပေမဲ့ အခုမှ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမူကို အားယူနေတဲ့
ကလေးတွေအတွက်ကတော့ စိုးရိမ်စရာပါ။ သူတို့ မိဘတွေ အတွက် ပြောပါတယ်။ အဲ ဘယ်လို ဖြစ်သလဲဆိုတော့ အဖြစ်ကဒီလိုပါ။ အဓိက က မိဘတွေရဲ့သွန်သင်မူကလည်း သိပ်ကို အရေးကြီးပါတယ်။
အိမ်မှာ တီဗီက တစ်လုံးတည်းရှိတော့ ကာတွန်းလိုင်းက မကြာခဏလာနေတဲ့ ကာတွန်းကားကိုလည်း သားတော်မောင်က အလွတ်မပေး၊ ဦးဦးတွေ၊မမေတွေကလည်း ကိုးရီးယားကား ကိုက်နေကြတာ ဆိုတော့ သားသားလေးကို ဂျီမကျအောင် ဂိမ်းစက်လေးတွေနဲ့ ချော့ရတော့တာပေါ့။ အဲဒီမှာ ကောင်လေးက ကာတွန်းကားရယ်၊ တီဗီဂိမ်းရယ် လိုင်းနှစ်လိုင်း ပူးပြီး မျက်စိက အများတကာ အလယ်မှာ ပုတ်ခတ် ပုတ်ခတ် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဆရာဝန်ပြ ကြည့်တော့ မျက်စိ အာရုံကြော အားနည်းတာ ပါလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါကတစ်ချက်ပါ။
ကျန်တာကတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းတွေထဲ အင်တာနက်တွေထဲ စိတ်ရောက်နေတဲ့ အခါ အမေ (သို့ ) အဖေက တစ်ခုခုကို
စေခိုင်းတဲ့ အခါ ပြောတဲ့ အခါ ဂိမ်းကို သဲကြီးမည်းကြီး ဆော့နေတော့ အလေးမမူစရာတွေ နဲ့ ဖြစ်လာပြီး ကြာလာရင် မိသားစု ဆက်ဆံရေးမှာ ထိခိုက်စေပါတယ်။
ဆုံး ဖြတ်ချက်တိုင်းဟာ စိတ်ရှည်မူနဲ့အတူလာတာဖြစ်ပြီး ဘ၀ကို လျှောက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာ သည်းခံမူက သိပ်ကို အရေးကြီးလှပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခုမှ ဘ၀ကို အစပျိုး သင်ယူနေတဲ့ ကလေးတွေဆီမှာပေါ့။ လေ့လာမူတွေအရ နည်းပညာကို မမှန်မကန်စွာ အသုံးပြုနေခြင်းကြောင့် ကလေးတွေမှာရှိတဲ့ သည်းခံမူဟာ လျှင်မြန်စွာ ပျောက်ကွယ် လာနေပြီးလို့ သိရပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဥပမာ တစ်ခု အနေနဲ့ အင်တာနက် သုံးတဲ့ အခါ ပေ့ခ်ျတွေကို ကြည့်ဖို့ Load အချိန်ကိုကျော်ပြီး မြန်မြန်ရတာတွေ များလာတဲ့ အခါ သူတို့ရဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ အသိမှာ ဒါတောင် မြန်မြန်ရသေးတာ တစ်ခြား ကိစ္စတွေက ဘာလို့ မရတာလဲလို့ မသိစိတ်မှာ စွဲသွားပါတော့တယ်။ ဒါဟာ ကြီးပြင်လာတဲ့ အခါ ပြန်ဖျက်ဖို့ ခက်တဲ့ အသိနက်နက် တစ်မျိုးပါပဲ။
ဒါကတော့ အွန်လိုင်း ချက်တင်၊ Shortcuts တွေဆီက နေ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ဆိုးကျိုးတစ်ရပ်ပါပဲ။ သူတို့ဟာ တိုးတက်လာတဲ့ ဒီဂျစ်တယ်
ကွန်မြူနစ်ကေရှင်ပေါ်မှာ မှီခိုသထက် မှီခိုလာပြီး ခက်ခဲတဲ့ စကားလုံးတွေကို မပေါင်းလို၊ မသိလိုကြတော့ပါဘူး။ ဒါအပြင် သဒ္ဒါကျကျရေးသားမူတွေကိုလည်း
ဒါကြောင့် နည်းပညာ တိုးတက်လာမူနဲ့ လိုအပ်လာမူရဲ့ နောက်မှာ ရှင်သန်ရင်း အသက်အရွယ်တစ်ခုရဲ့ နောက်မှာ မိဘတွေကလည်း သူတို့ကလေးတွေကို
မျက်စိနဲ့ အခြား အရာတွေ ထိခိုက်အောင် လွန်လွန်ကျွံကျွံ မသုံးစေဘဲ ဆင်ခြင်စေသင့်ကြောင်း အသိပေး ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
နေ့လယ် ထမင်းစား ဆင်းချိန်မှာ သားတို့ကျောင်းက ဆရာမက ကျွန်မကို ဖုန်းလှမ်း ဆက်တယ်။
" 'အံ့အံ့'တစ်ယောက် ဝရန်တာမှာ ဘောလုံးကစားရင်း ဘယ်ဘက်မျက်လုံး ဘောလုံးထိလို့ မျက်မှန်ပါ ကွဲသွားတယ်"
ကျွန်မစိုးရိမ်တကြီး ကျောင်းလိုက်သွားပြီး သွေးထွက်နေတဲ့ဘယ်မျက်လုံးကို လက်နဲ့အုပ်ထားတဲ့အံ့အံ့ကို ဆေးရုံပို့လိုက်တယ်။
ဆရာဝန်က "တော်သေးတယ်.. မှန်ကွဲစတွေက မျက်ခွံကိုပဲထိပြီး မျက်ဆံကိုမထိမိလို့။ ဒါပေမယ့် ၆ချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်" ပြောတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဝရန်တာမှာ ဘောလုံးကစားတဲ့အံ့အံ့ကို ကျွန်မ မအောင့်နိုင်ဘဲ ဆူမိတယ်။
"ဝရန်တာမှာ ဘောလုံးမဆော့ရဘူးလို့ ဆရာမပြောထားတာ မဟုတ်လား၊ ဘာလို့ ဆရာမစကား နားမထောင်ရတာလဲ အံ့အံ့"
"သားမဆော့ဘူး မေမေ။ သားအိမ်သာအသွားမှာ 'ဂျယ်ဂျယ်' ကန်လိုက်တဲ့ ဘောလုံးကြောင့် ထိသွားတာ။ ဆရာမက သားမလိမ္မာဘူးဆိုပြီး စိတ်ဆိုးတယ် မေမေ" နောက်တစ်နေ့ ကျောင်းကို ကျွန်မလိုက်သွားပြီး ဆရာမကို အကျိုးအကြောင်း ပြောပြခဲ့တယ်။ ဂျယ်ဂျယ်ကို မျက်မှန်ဖိုး မလျှော်စေဘူးလို့ ကျွန်မပြောမှ ဂျယ်ဂျယ်ကခေါင်းငုံ့ပြီး "အဲဒီနေ့က အံ့အံ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဘောလုံးမကစားခဲ့ပါဘူး" လို့ ဝန်ခံခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကျမှ ဆရာမက "အံ့အံ့က အမြဲလိမ္မာတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ပါ" လို့ လေသံပြောင်းသွားခဲ့တယ်။
ညနေကျောင်းဆင်းချိန်မှာ ခါတိုင်းလိုပဲ အံ့အံ့ကို ကျွန်မသွားကြိုခဲ့တယ်။ အံ့အံ့က ဂျယ်ဂျယ်ကိုတွေ့တော့ ဝမ်းသာအားရ "see you ဂျယ်ဂျယ်" လို့ နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။
"ဂျယ်ဂျယ်ကြောင့် မျက်မှန်ကွဲပြီး ဒဏ်ရာရခဲ့တာတောင် သူ့ကို စိတ်မဆိုးဘူးလား အံ့အံ့" ကျွန်မ တအံ့တသြ မေးလိုက်တယ်။ "မဆိုးပါဘူး မေမေကလဲ... သူတမင်လုပ်တာမှ မဟုတ်တာ" ကလေးငယ်ရဲ့စိတ်က အညှိုးအထေးမရှိ ဖြူစင်လွန်းခဲ့တယ်။
"ဒါပေမယ့် အံ့အံ့သွေးတွေ အများကြီးထွက်ပြီး ဆရာမကတောင် အံ့အံ့ကို မလိမ္မာဘူးလို့ အထင်လွဲသွားတယ် မဟုတ်လား။ ဒဏ်ရာကို ၆ချက်တောင် ချုပ်လိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ မျက်မှန်ဖိုးလည်း အလျှော်မရခဲ့ဘူး" ကျွန်မ မကျေမနပ်ဆိုတော့.....
"ကိစ္စမရှိပါဘူး မေမေ။ နောက်ဆုံးတော့ သားမဆိုးမှန်း ဆရာမသိသွားတာပဲ မဟုတ်လား။ ကံကောင်းလို့ မှန်ကွဲစတွေ မျက်လုံးထဲ မဝင်ခဲ့တာ၊ ကံကောင်းလို့ ဘောလုံးကစားတဲ့ ကျောင်းသားတွေ အပြစ်ပေးမခံရတာ" ဆိုင်ကယ်နောက်မှာထိုင်နေတဲ့ အံ့အံ့က သူ့ခေါင်းကို ကျွန်မကျောပေါ်ကပ်ပြီး...
"မေမေ.. သိလား။ ဂျယ်ဂျယ်မှာ မေမေမရှိတော့ဘူး။ အလုပ်လက်မဲ့ သူ့ဖေဖေက ဂျယ်ဂျယ်ကို အမြဲ ရိုက်နှက်တတ်တယ်။ ကံကောင်းလို့ သူ့ကို မေမေမျက်မှန်မလျှော်ခိုင်းတာ.. သူ့ဖေဖေသာသိရင် သူအရိုက်ခံရမှာ"
ကျွန်မခါးကို အံ့အံ့တင်းတင်းလေး တိုးဖက်လိုက်ပြီး "ကံကောင်းလို့ သားမှာ သားကိုချစ်တဲ့ ဖေဖေမေမေရှိသေးတယ်။ အော်.. မေမေ မျက်မှန်ကို သားမုန့်ဖိုးထဲကနေစုပြီး ဝယ်လိုက်မယ်နော်" အိမ်ထဲကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပြေးဝင်သွားတဲ့ သားကိုကြည့်ပြီး ကျွန်မ မျက်ရည်ဝဲမိတယ်။
သားရယ်.... သားကို မေမေအားနာလိုက်တာ... သားမလိမ္မာဘူးလို့ ဆရာမ အထင်လွဲမှာကိုပဲ မေမေတွေးခဲ့မိတယ်၊ တခြားသူကြောင့် သား ဒဏ်ရာရ နာကျင်တာကိုပဲ အမေမြင်ခဲ့မိတယ်။ သားရဲ့ "ကံကောင်းလို့" ဆိုတဲ့စကားက ဘယ်အရာကို ကြင်နာခြင်း၊ သဘောထားကြီးခြင်း၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ တန်ဖိုးထားခြင်းလို့ ခေါ်တယ်ဆိုတာ မေမေ့ကို သင်ခန်းစာ ပေးလိုက် သလိုပါပဲ။ ကျေးဇူးတင် ပါတယ် သားရယ်....
သီပေါ စော်ဘွား စ၀်ကြာဆိုင်သည်သီပေါ စော်ဘွား စော်ဘွား စ၀်အုိုနှင့် စ၀်စိန်လွှာမှ 1924 ဖွားမြင်တော်မှုပြီး မွေးချင်းများဖြစ်ကြသော စ၀်ကြာဆုန်၊ စ၀်မမ၊ စ၀်ကြည်စု၊ စ၀်ယဉ်နုတို့၏ မောင်အငယ်ဆုံး ဖြစ်သည်။
1932 – 1935မေမြို့ ဂျိုးဇက်ကျောင်းတွင် (St.Joseph)ပညာသင်ကြား၍1935 – 1941သျှမ်း ချိ့စ်ကျောင်းတွင်၎င်း( Shan Chief` School)။ 1941 ခနှစ်တွင် အခြေခံပညာ အထက်တန်းမောင်မြင်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တာဂျီလိန် (St. Paul)၎င်း ဆက်လက်၍( Senior Cambridge)။ 1947 (January) သီပေါစော်ဘွားဖြစ်ကို ခံယူလေသည်။1949 (October) ထိုနောက် အမေရိကန်(Colorado) ပညာသင်ကြား။ 1953 (Mining Engineer)။ 1953 (March) (Austria) (Inge)အင်ဂျီးနှင့်တွေ့ဆုံ 1954 (January) စ၀်ကြာဆိုင်သည် အင်ဂျီး(Inge)နှင့်အတူ သီပေါ သို့ပြန်လည် ရာက်ရှိလာသည်။
အနာဂတ် သျှမ်းပြည်တွက် ဆားရရှိရန် ဘောကြိုဒေသမှ ဆားထွက်ရှိသည့် ဒေသတို့ ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်း လေ့လါသုတေသနများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘော်ကြိုဘုရားပွဲတွင် သျှမ်းအမျိုးသားများသည် အလေါင်းအစား ခုံမင်းနှစ်သက်သည်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိ၍ နောင်အနှစ်ပွဲတော် ကျင်းပချိန်တွင် ဘော်ကြို ဘုရားပွဲတော်တွင်း အလေါင်းစားများ ပြုလုပ်ခြင်းများ ပိတ်ပင်သည်ဟု သိရှိပါသည်။ စော်ဘွားကြီး စ၀်ကြာဆိုင်သည် သျှမ်းအမျိုးသားများ ချစ်ခင်လေးခြင်း ယုံကြည်ကိုးစားခံရသော စော်ဘွားတဦးဖြစ်သည်။
1948 ခုနှစ် မိုင်းရှုးစော်ဘွား စ၀်မန်ဖ၏ နေအိမ်တွင် စော်ဘွားကြီးများ တံခါးပိတ်အစည်းဝေး၌ ပထမ အချက်ဖြစ်သည့် သျှမ်းပြည်ပြည်သူ့ အစိုးရသို့ အာဏာစွန့်လွှတ်ရေးဆိုသည်ကို အားလုံးလိုလို လက်ခံခဲ့ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မဟာရာဂျာ ( ) စော်ဘွားများသည် ပင်၎င်းတို့၏ အာဏာကို အစိုးရထံသို့ ပေးအပ်စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ် သောကြောင့်ပင်။ ကမ္ဘာနှင့် အ၀ှမ်းထူးခြားစွာဖြစ်ပျက် ပြောင်းလဲနေသော နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို မလွန်ဆန်နိုင်တော့ဟုလည်းကြောင်းပြုကြသည်။
ဒုတိယ- အချက်ဖြစ်သည့် လျော်ကြေးငွေယူရန် မယူရန်ကို မှု အငြင်းအခုံဖြစ်ခဲ့ကြ၏ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး စ၀်မန်ဖက ဖြစ်နိုင်လျှင် လျော်ကြေးငွေကို မယူရန်တင်ပြခဲ့ပါသည်။ နောင်သောအခါတွင် သျှမ်းပြည်၏ ပြည်သူလူထုသားစဉ်မြေးဆက်တို့ အနေဖြင့် သျှမ်းပြည်ကြီးကို သျှမ်းစော်ဘွားများက ငွေကြေးဖြင့် လဲလှယ်၍ ရောင်းစားသွားခဲ့ကြသည်ဟူသော သမိုင်းအမည်း စက်ကြီးစွန်းထင်းကျန်ရစ် နေခဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပေသည်။ ထိုအဆိုတင်သွင်းချက်ကို သီပေါ စော်ဘွား စ၀်ကြာဆိုင်နှင့် အချို့သော စော်ဘွားငယ် (နယ်ငယ်သောစော်ဘွားများကိုဆိုလိုသည်) များတဦး နှစ်ဦးခန့်ကသာ ထောက်ခံခဲ့ကြပါသည်။
အင်ဂျီ ကို ၁၉၃၂ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၃ရက်နေ့တွင် သြစတြီးယားနိုင်ငံ၊ Kärntenဒေသတွင် မွေးဖွါးခဲ့သည်။ ၆နှစ်သမီး အရွယ်တွင် နာဇီကျူးကျော်မှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး၊ သူမ၏ အမေကိုယ်တိုင် နာဇီများ၏ ဖမ်းဆီးမှုကို သုံးကြိမ်ခံခဲ့ ရဖူးသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး သြစတြီးယားနိုင်ငံမှာ များစွာ ခက်ခဲဆင်းရဲ လာသောကြောင့် အမေရိကန်တွင် ပညာဆက်လက် သင်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၁ခုနှစ်တွင် Fulbright ပညာသင်ဆုရရှိသူ ပထမဆုံးသော သြစတြီးယားလူမျိုး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကော်လိုရာဒို၊ အမျိုးသမီးကောလိပ်တွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။
အဲဒီတုန်းက..ကျောင်းအုပ်ကြီးကလွဲလို့.. ဒီ အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသားလေးဟာ အာရှတိုက်က.. ဘုရင်ငယ်လေး တပါး ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိစေအောင်..သူကိုယ်တိုင်က..သိုဝှက်ထားခဲ့တယ်တဲ့။ ကော်လိုရာဒိုတွင် ပညာဆည်းပူးနေစဉ် Colorado school of Mining မှ မိုင်းတူးအင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသား သီပေါစော်ဘွား စဝ်ကြာဆိုင်နှင့် ဖူးစာဆုံခဲ့ကြသည်။ ၁၉၅၃-ခုနှစ်တွင် ကော်လိုရာဒိုရှိ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးအိမ်တွင်ပင် လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။
သူတို့ ၂ယောက် လက်ထပ်ပြီးတော့.. အင်ဂျီက..ယောင်နောက်ဆံထုံးပါ.. လိုက်လာခဲ့တယ်။ သူတို့ သဘောင်္ကြီး ရန်ကုန် ဆိပ်ကမ်းကို ကပ်ကာနီးလို့ .. အလံတွေ ပုဝါတွေ တရမ်းရမ်း..ဗုံမောင်းသံ တညံညံ နဲ့ ဆိပ်ကမ်းပြည့် ကြိုနေကြတဲ့ ရှမ်းလူမျိုးတွေကို မြင်တော့မှ…. “There is something I have to tell you, my dear.” လို့ ပြောလိုက်တဲ့..ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ စကားအဆုံးမှာ… သူမဘ၀ဟာ အရှင်လတ်လတ်ကနေပြီး.. မင်းသမီးတပါး ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး…ပြိုင်တည်းမှာပဲ..ရှုပ်ထွေးလာနိုင်မဲ့ သူ့ အနာဂါတ်ကိုလည်း အာရုံရမိလိုက်တယ်..လို့.. အင်ဂျီက လွမ်းဆွတ် ထားပါတယ်။
သီပေါသို့ ရောက်ရှိပြီး လအတန်ကြာတွင် တရားဝင်ရိုးရာ လက်ထပ်အခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ဗေဒင်နက္ခတ်အရ မဟာဒေဝီ စဝ်သုစန္ဒီ ဟူသော ရှမ်းအမည်ကို ရရှိခဲ့သည်။ သူတို့ မောင်နှံ သီပေါ ဟော်နန်းကို ရောက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး..အဲဒီ နယ်တခွင်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးတွေ ဖြစ်လာတော့တယ်။
စပ်ကြာဆိုင်က..သူကိုယ်တိုင် လူဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြေရှင်ပဒေသရာဇ် စနစ်ကြီး ကို ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားရင်း..သူ့ရဲ့ ရှမ်းအမျိုးသားတွေကို ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဆီ လမ်းခင်းပေးခဲ့တယ်။ မြေယာတွေ ကို ပြည်သူ့ဆီ ပြန်ရောက်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ သူသင်ခဲ့တဲ့ ပညာတွေနဲ့..ဒီဒေသ ရဲ့ အသက်သွေးကြော..တွင်းထွက် သယံဇာတတွေ ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့တယ်။
သြစတြေလျ နိုင်ငံက..ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်တွေ ငှားပြီး တိုင်းတာ ရှာဖွေရေး တွေကို အကောင်းဆုံးအဆင့် နဲ့လုပ်တယ်..။ နိုင်ငံခြားက..မျိုးစိတ်အသစ်တွေ ၀ယ်ယူပြီး.. စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွေကို..စက်မူ နည်းပညာတွေနဲ့ မြှင့်တင်ပေးခဲ့တယ်။ စဝ်သုစန္ဒီသည် အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း ဗမာ၊ ရှမ်း ဘာသာစကားများကို သင်ယူ တတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး မိမိကိုယ်ကို ရှမ်းလူမျိုး တစ်ဦးအဖြစ် စတင်ခံယူလာခဲ့သည်သာကမ၊ သီပေါဒေသခံများကလည်း သူမအား ရှမ်းလူမျိုး မဟာဒေဝီ တစ်ဦးအဖြစ် လက်ခံလာကြသည်။ ထို့အပြင် စဝ်သုဒေဝီသည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် တွဲဖက်ကာ သီပေါဒေသ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီခဲ့ပြီး သားဖွားဆေးခန်းနှင့် ဗမာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ ရှမ်း ဘာသာသုံးမျိုးဖြင့် သင်ကြားသော စာသင်ကျောင်း ကိုတည်ထောင်ရင်း ကိုယ်တိုင် လုပ်အားပေးခဲ့သည်။
မာယာရီ နှင့် ကိန္နရီ အမည်ရှိ သမီးနှစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။ အင်ဂျီ ကိုယ်တိုင်လည်း စာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ တွေကို ကိုယ်ဖိ ရင်ဖိ ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ ဗမာလုံခြည်နဲ့ ဆံထုံးနဲ့ နေထိုင် ဆင်ယင်ခဲ့တဲ့ အင်ဂျီ တဖြစ်လဲ သုစန္ဒီမင်းသမီးကို အားလုံးက.. အလေးထား လေးစားခင်မင်ကြတယ်။ အဲဒီ ရပ်ရွာတွေမှာဆို.. သူတို့ မောင်နှံပုံကို ဘုရားစင်မှာတင်ပြီး ကိုးကွယ်တာမျိုးတောင် ရှိခဲ့တယ်တဲ့။
ဒါပေမဲ့.. လူကောင်းလူတော် တွေကို ၀မ်းပမ်းတသာ ကြိုဆို လက်ခံလေ့ မရှိတဲ့..ဒီမြေ..ဒီရေ..ဒီထုံး..ဒီအမုန်းတွေနဲ့ အတူ ၁၉၆၂ ခု နှစ် မတ်လ ရဲ့ နိုင်ငံရေး မုန်တိုင်း ထဲမှာပဲ..ရန်ကုန်မြို့လွှတ်တော်ညီလာခံ က အပြန် ဘယ်မှာ ပျောက်ဆုံး သွားမှန်း မသိတဲ့ သီပေါ စော်ဘွား စပ်ကြာဆိုင် ကို ယနေ့ထက်ထိ ဘယ်သူမှ ပြန်မတွေ့ကြရတော့ပါဘူး။
သီပေါစော်ဘွားစောဝ်ကြာဆိုင်ဟာ.. ၁၉၆၂ခုနှစ် စစ်အာဏာ အသိမ်းမှာ တခြားသော.. တိုးတက် ထက်မြတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် များနည်းတူ.. လက်စဖျောက် ခံခဲ့ရပြီးနောက် အင်ဂျီ တဖြစ်လဲ သုစန္ဒီမင်းသမီးလေး ဟာသမီးငယ် နှစ်ယောက်နှစ်အတူ မြန်မာပြည်မှ ထွက်ခွါလာခဲ့ရပါသည်။ သြစကြီးယားနိုင်ငံ ဗီယင်နာမြို့Schloss Laudon ဆိုတဲ့ ဇိမ်ခံ ဟော်တယ်ကြီး တခုရဲ့ ဧည့်ခန်းထဲကို နောက်ဆုံးသော မျှော်လင့်ချက်တွေ.. နာကျည်းမူတွေ နဲ့ အတူ သမီးလေး ၂ယောက်ကို လက်ဆွဲပြီး ဟော်တည်ရှေ့ မျက်ခင်းစိမ်းစိမ်းကို ဖြတ်၍ အထဲသို့ ၀င်လာတဲ့.. အမျိုးသမီးငယ် တယောက် အဲဒီ အမျိုးသမီးကတော့..တချိန်တုန်းက.. ရပ်ရွာလူထု က..ချစ်ခင်လေးစားခဲ့ကြတဲ့.. ရှမ်းမင်းသမီးတပါး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ..သြစကြီးယားနိုင်ငံသူ အင်ဂျီ ဖြစ်ပြီး.. သူလက်ဆွဲလာတဲ့ ကလေး ၂ယောက်ကတော့.. ကိန္ဒရာ နဲ့ အမရာ (ကိန္ဒရီ နဲ့ မာယာရီ) ဆိုတဲ့ ရှမ်း-သြစကြီးယန်း ကပြား သမီးလေး ၂ယောက်ပါ။
သူတို့ တွေ့ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ သူကတော့.. လန်ဒန်မြို့မှာ ဇိမ်ခံ ရင်း ..ဆေးကုဖို့ ရောက်နေတဲ့..မြန်မာပြည်က..ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးနေ၀င်း (မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ဥက္ကဌ) ဖြစ်ပါသည်။ အဖြစ်အပျက်တွေက..ဆယ်စုနှစ် ကြာနေပြီ ဖြစ်ပေမဲ့.. အင်ဂျီ မှာ..သူ့ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ ကံကြမ္မာ ဘယ်လို အဆုံးသပ်ခဲ့ရတယ် ဆိုတာ..သိဖို့အတွက်..ဇွဲမလျော့ပဲ တောက်လျှောက် ကြိုးစားနေခဲ့တယ်။ အခုလည်း.. သတ္တိတွေ အပြည့်နဲ့ လူကိုယ်တိုင် မျက်နှာချင်းဆိုင် မေးဖို့..သူ ရောက်လာခဲ့ပြန်တယ်။
ဒါပေမဲ့..အခန်းထဲက..ထွက်မလာတဲ့..တာဝန်ရှိသူကြီးက.. သူ့ဇနီး ဒေါ်ခင်မေသန်းကို လွှတ်ပြီး..စပ်ကြာဆိုင် မသေသေးပါဘူး..ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိနေပါတယ် လို့.. အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအဖြေ စကားက..အခြေအမြစ်မရှိ သလို ဘယ်ကိုမှ ဆက်သွားစရာလည်း မရှိတော့တဲ့.. ငရဲကလာတဲ့ အလိမ်အညာ လမ်းဆုံးစကားတခုသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ..သူသိပေမဲ့.. အခု ထက်ထိလည်း..သူ့ခင်ပွန်း အလောင်း ကို မတွေ့ခဲ့ရ။ တကယ်တော့.. ငယ်ရွယ် ထက်မြတ်တဲ့ သီပေါ စော်ဘွား စပ်ကြာဆိုင် ဟာ.. ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်အာဏာ အသိမ်းမှာ တခြားသော.. တိုးတက် ထက်မြတ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် များနည်းတူ.. လက်စဖျောက် ခံခဲ့ရတာပါ။
လက်စားခြေသတ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ယူဆရတဲ့ အာရပ် ဆယ်ကျော်သက်ဟာ
ရင်ခွဲစစ်ဆေးမှုတွေအရ မီးရှို့သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ ပါလက်စတိုင်းရှေ့နေချုပ်က
လုပ်သေနပ်ကိုင်ဆောင်သူအား ထောင်ချခြင်းအပေါ် ပြန်လည်စိစစ်ပေးမည်ဟု ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမောင်မောင်အုန်းပြောကြား
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက်နယ်စပ် မောင်တောမြို့နယ် မြောက်ပိုင်း တောင်ပြိုမြို့
နယ်ခွဲ၊ သဲချောင်းအုပ်စု၊ ကျွန်းတောင်ရွာဟောင်းတွင် တစ်ဦးတည်းနေထိုင်ကာ တူးမီး လုပ်သေနတ်
တစ်လက်ဖြင့် ၎င်း၏ ဘိုးဘွားပိုင် လယ်မြေကို
ကာကွယ်နေသူကိုသန်းထိုက်အား ရဲများက ဖမ်းဆီး ထောင်ချလိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့မိမြိ့ဖ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးသန်းထွန်းက တင်ပြသဖြင့် ယင်းအပေါ် ပြန်လည် စိစစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမောင်မောင်အုန်းက ယနေ့တွင်ပြော ကြား လိုက်သည်။
“လုပ်သေနပ်ကိုင်တယ်ဆိုတာကလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ တောပစ်ဖို့ကိုင်တာ၊ လုံခြုံရေး အတွက် ခုခံကာကွယ်ဖို့ကိုင်တာ၊ အစရှိသည်ဖြင့်ရှိတယ်။ သေနပ်ကိုင်တိုင်းလည်း အဖြစ်မဟုတ် ပါဘူး”ဟု ဦးမောင်မောင်အုန်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကိုသန်းထိုက်အား ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ် (၁) နှစ် ချမှတ် လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းသို့ ချမှတ်ခြင်းသည် ဒေသတွင်း နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသားများအတွက် အခက်အခဲများစွာဖြစ် စေ ကြောင်းနှင့် ဘင်္ဂလီများ လက်ထဲသို့ ရောက်ရှိနေသော နေသပ်များကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖော်ထုတ်ဖမ်း ဆီး နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ ဒုချရားတန်းကိစ္စတွင် ဘင်္ဂလီများဘက်မှ ခေတ်မီလက်နက်များဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့မှု များလည်း ရှိခဲ့ကြောင်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ချို့မှသိရသည်။ သို့သော်လည်း ယင်းသတင်းကို သက် ဆိုင်ရာမှ ဖုံးဖိထားခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ကိုသန်းထိုက်သည် မိမိလုံခြုံရေးနှင့် မိသားစုလုံခြုံရေးအတွက် လက်လုပ်သေနပ် အား ကိုင် ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သော်လည်း၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် တောင်ပြိုမြို့နယ်ခွဲ ရဲစခန်းတွင် တာဝန်ကျနေသူ ဒုရဲအုပ် ရဲရင့်မင်းဖြိုးဝေမှ ၎င်းရွာသို့ သွားရောက်ပြီး ဖမ်းဆီးခဲ့ကာ တရားမ၀င် သေနတ်ကိုင်ဆောင်မူဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
ဒုရဲအုပ် ရဲရင့်မင်းဖြိုးဝေ သည် မကြာသေးမီကလည်း တရားခံတစ်ဦးအား ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူး လွန်မှုဖြင့် တရားခံအား ငွေငါးသိန်းကျပ် လျော်ကြေးပေးထားရသူဖြစ်သည်။ တရားခံဖြစ်သူမှာ စစ်တွေ ဆေးရုံသို့ တက်ရောက်ကုသခံရ သည်အထိ ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့သည်။ ယင်းအတွက် တိုင်းရင်း သားများအပေါ် အခဲမကျေဖြစ်နေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
Arakan News Online
အစ္စလာမ်သင်္ချိုင်းအား မီးရှို့သူများနှင့် တုတ်၊ ဓား လက်နက် ကိုင်ဆောင်ရမ်းကားသူ ခုနစ်ဦးကို ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)၊(ဂ) နှင့် ပုဒ်မ (၂၅၄/၁၄၇) တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူ
အေးရိပ်ငြိမ်သုသာန်နယ်မြေရှိ အစ္စလာမ်သချိုင်းအား မီးရှို့သူများနှင့် တုတ်၊ ဓား၊ လက်နက်
ကိုင်ဆောင်ရမ်းကားသူ ခုနစ်ဦးကို ပုဒ်မ ၅ဝ၅(ခ)(ဂ)နှင့်ပုဒ်မ ၂၅၄/၁၄၇ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေး
ဇူလိုင် ၁ ရက်ညမှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်တွင် အသတ်ခံရသူ ကိုထွန်းထွန်းနာရေး၌ အခြားဘာသာဝင်များ၏ သုသာန်မီးရှို့သူများနှင့် တုတ်၊ ဓား လက်နက်ကိုင်ဆောင်ရမ်းကား ဖျက်ဆီးသူ ခုနစ်ဦးကို ဘာသာရေးနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာကို စော်ကားဖျက်ဆီးမှု၊ နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှု ပျက်ပြားစေပြီး အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေမှု၊ ဘာသာအချင်းချင်း မသင့်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်စေမှု စသည့်ပုဒ်မများဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်း ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သတင်းရရှိသည်။
ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ပထမညတွင် တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော်လည်း ဇူ လိုင် ၄ ရက် ၁ နာရီနောက်ပိုင်း၌ အသတ်ခံရသူ ကိုထွန်းထွန်း၏ ဈာပနအခမ်းအနားကို လူတစ်သောင်းခန့် လိုက်ပါပို့ဆောင်ရာ လမ်း ၈ဝ တွင် ဗလီဘေးတွင် ရပ်ထားသော ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်ကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ အေးရိပ်ငြိမ်သုသာန်(ကြာနီကန်)ရှိ ဘာသာခြားသုသာန်များကို မီးရှို့ခြင်း၊ တုတ်၊ ဓား လက်နက်များဖြင့် ရမ်းကားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ အေးရိပ်ငြိမ်သုသာန်တွင် ဖြစ်ပွားနေစဉ် မန္တလေးမြို့တွင်းရှိ ဗလီများဖျက်ဆီးမည်ဟူသော သတင်းစကားကောလာဟလများ ပျံ့နှံ့နေပြီး ဈေးများ၊ ဆိုင်ခန်းများ မွန်းလွဲ ၃ နာရီနောက်ပိုင်း ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။
လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေသော ရဲတပ်ဖွဲ့မှာလည်း ဈာပနအခမ်းအနားပြုလုပ်နေစဉ်အချိန်တွင် နံဘေးလိုက်လံစောင့်ကြည့်နေပြီး နာရေးချအပြီး နန်းရှေ့ ၁၅ လမ်း၊ ၆၆ နှင့် ၆၁ လမ်းကြား တစ်လျှောက် ထပ်မံသောင်းကျန်း ဖျက်ဆီးဆူပူသူများကို ဖမ်းဆီး အရေးယူခဲ့သည်။
“နာရေးအခမ်းအနားမှာ ဘာသာခြားတွေရဲ့ သုသာန် မီးရှို့ဖျက်ဆီးသူတွေကို တရားခံပြေးအဖြစ် အမှုဖွင့်ထားတယ်။ နာရေးကအပြန်တော့ တုတ်၊ ဓားနဲ့ ဆူပူအော်ဟစ်ဖျက်ဆီးသူတွေကို စောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးခဲ့တာ နန်းရှေ့ ၁၅ လမ်းဘက်မှာ ဖမ်းမိပါတယ်။ တချို့ထွက်ပြေးတဲ့သူတွေကိုလည်း ရှာဖွေဖမ်းဆီးနေပါတယ်” ဟု ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ခရိုင်မှူးက ပြောကြားသည်။
ဈာပနအပြန် နာရေးရှင်အိမ်ရှိရာ နန်းရှေ့ ၁၅ လမ်းနှင့် ၆၂ လမ်းထောင့်တွင် သုံးဦး၊ ၁၅ လမ်း၊ ၆၃ နှင့် ၆၄ လမ်းကြားတွင် လေးဦးကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီး ပုဒ်မ ၂၉၅/၁၄၇၊ ၅ဝ၅(ခ)(ဂ)ဖြင့် အမှတ်(၁)ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။ ဇူလိုင် ၂ ရက် ညကလည်း လူလေးဦးကို ဆူပူမှုဖြင့် အရေးယူထားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင်ဇွန်လအတွင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် Viber
မှတစ်ဆင့် ချစ်ကြိုက်နေသည့် ချစ်သူမိန်းကလေးအား သတ်ဖြတ်ကာ ပိုက်ဆံနှင့် ရွှေထည်များ
ယူဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့သည့်အမှု မှ ကျူးလွန်သူအား ဇူလိုင် ၂ ရက်က ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဘိုကလေးမြို့နယ်၌ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း မင်္ဂလာဒုံမြို့မရဲစခန်းမှ စုံစမ်းသိရသည်။
မင်္ဂလာဒုံမြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူး ဝင်းမြင့်က “ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူက ဇာနည်ဆိုတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မိုးဇော်ဆိုတဲ့သူကတော့ ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဖုန်းအမည်ပေါက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတော့ သူက ငါဒီလိုပြဿနာတက်ပြီ။ မင်းပါလိုက်ခဲ့မှ ရမယ်ဆိုပြီး အတူတူထွက်ပြေးသွားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်ပြီး ၎င်းက “သူတို့ပုန်းနေတဲ့နေရာက ရဲတွေအလှမ်းဝေးတဲ့နေရာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ဆီကနေ သက်သေခံပစ္စည်းတွေ သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ မင်္ဂလာဒုံရဲစခန်းမှာပဲ ချုပ်ထားပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇွန် ၁၃ ရက် ညနေ ၃ နာရီ ခွဲခန့်တွင် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ဈေးရပ်ကွက် မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်ပန်းခြံအတွင်းရှိ ဝါးရုံအောက်၌ ပုပ်ပွနေသည့် အမျိုးသမီးလူသေလောင်း တစ်လောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
သေဆုံးသူမှာ ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
သက်ဆိုင်ရာကစုံစမ်းရာ သေဆုံးသူမှာ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ကနေ ရန်ကုန်မြို့ထဲ ဈေးကြီးများမှ အဝတ်အထည်များဝယ်ယူကာ တစ်ဆင့်ရောင်းချနေသော မ.......(၃၂)နှစ် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဇွန် ၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင်လည်း အဝတ်ဝယ်မည်ဆိုကာ နေအိမ်မှ ထွက်သွားခြင်းဖြစ်ပြီး အသတ်ခံရသည့်အမျိုးသမီးနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ဇာနည်ဆိုသူတို့ မှာ Viber တွင် တွေ့ဆုံချစ်ကြိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အသတ်ခံရကာ ပစ္စည်းများ လုယက်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအမှုကို မင်္ဂလာဒုံမြို့မရဲစခန်းက (ပ)၂၅၈/ ၁၄ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃ဝ၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေးရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု လုပ်နေကျလူတွေ အစီအစဉ်တကျ လုပ်သွားတာ (မေးမြန်းချက်)
ဇူလိုင်လဆန်းပိုင်က မန္တလေးမြို့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရုန်းရင်ဆန်ခတ်မှုတွေဟာ အစီအစဉ်တကျ လုပ်နေကျလူတွေက လုပ်သွားတာလို့ မြို့ခံသတင်းစာဆရာနဲ့ စာရေးဆရာ ကျော်ရင်မြင့်က ပြောပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေ ကိုင်တွယ်မှု အားနည်းချက် ရှိတာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဆရာ ကျော်ရင်မြင့်ကို ဒီဗွီဘီက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
နာနတ်သီးက အစာချေဖျက် အားကောင်းဖို့ ထောက်ကူပေးပြီး အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အကျိုးပြုကာ ၀မ်းချုပ်တာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝ ၀မ်းနုတ်ဆေး တစ်လက်ဖြစ်တဲ့အ ပြင် သန်ကောင်ရောဂါတွေကို လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီ ကြွယ်ဝတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ရောဂါပိုးမွှားတွေကို သေစေနိုင်စွမ်းရှိပြီး အအေးမိ၊ တုပ်ကွေး၊ နားရောဂါတွေနဲ့ တခြားကူးစက် ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါ တယ်။ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားတာ၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဆဲလ်တွေပျက်စီး တာ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါဖြစ်ပွားတာတွေကို ကာ ကွယ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွေးတိုးရောဂါတွေ၊ ရောင်ရမ်းတာတွေ လျော့ပါးသက်သာ စေပါတယ်။
နာနတ်သီးမှာပါတဲ့ ဗီတာ မင်အေက အမြင်အာရုံအတွက် အကျိုးပြုတဲ့အပြင် အရိုးကျန်းမာ ရေးအတွက်ပါ ကောင်းစေပြီး အရိုးပွတာကိုလည်း ကာကွယ် ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကြည်လင်တဲ့ အသားအရေ ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ နာနတ်သီးက အကောင်းဆုံးကူ ညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ပျက်စီးနေတဲ့ အရေပြားဆဲလ်တွေ၊ တစ်ရှူးတွေ ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးပြီး အသား အရောင်ဖြူဝင်းစေနိုင်ကာ အ ရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်တာ ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် သွားတွေခိုင်မာ စေပြီး ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက် လည်း ကောင်းမွန်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုဆို နာနတ်သီး ပေါ်ချိန်လည်း ဖြစ်တာကြောင့် ကောင်းကျိုးတွေ တစ်ပုံကြီးရှိတဲ့ နာနတ်သီးကို မမေ့မလျော့စား ရင်း ကျန်းမာသော ဘ၀ကိုဖြတ် သန်းကြရအောင်ပါ။
သားဖြစ်သူ မင်းသန့်မောင်မောင်၏ ပထမဆုံးအနုပညာလှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့် ကြော်ငြာတစ်ခုကို မကြာမီရက်ပိုင်းအတွင်း ရိုက်ကူးသွားမည်ဟု ဒါရိုက်တာစင်ရော်မောင်မောင်ကပြောသည်။
‘‘Birthday ကော်ဖီကြော်ငြာ ကို ဟန်သီနဲ့ ရိုက်မှာပါ။ နောက် ဆယ်ရက်လောက်နေရင် ရိုက်ဖြစ်မယ်’’ဟု ၎င်းကပြောသည်။
မင်းသန့်မောင်မောင်သည် ဇူလိုင်လ ၃ ရက်တွင် အသက် (၁၇) နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီး လက် ရှိအချိန်မှစတင်၍ အနုပညာလှုပ် ရှားမှုများစတင်ပြုလုပ်တော့မည် ဟု ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်ကပြောသည်။
‘‘လောလောဆယ်တော့ မင်းသန့်ကို Directing တွေ၊ Com-puter Editing တွေ၊ Software တွေ၊ ကင်မရာယူပုံယူနည်းတွေ၊Lighting ပေးပုံပေးနည်းတွေ၊ 2D၊ 3D တည်ဆောက်တာတွေ သင်ပေးနေတာတော့ နှစ်လလောက်ရှိပြီ။ နောက်ခြောက်လလောက်နေရင်တော့ ပြည်ပမှာကျောင်းသွားတက်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်’’ဟု စင်ရော်မောင်မောင်ကပြောသည်။
ပြည်ပသို့ မသွားရောက်မီ ကြော်ငြာများ ရိုက်ကူးသွားရန် အစီအစဉ်ရှိပြီး ပြည်ပတွင် သွား ရောက်ပညာသင်သည့် ကာလပြီးဆုံးမှသာမိဘနှစ်ဦး၏အမွေကို ဆက်ဆံသောအားဖြင့် ဒါရိုက် တာ၊ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်လှုပ်ရှားသွားရန် အစီအစဉ်ရှိ ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
‘‘ကျောင်းသွားတက်တာက သုံးနှစ်လောက်တော့ကြာမယ်။ အဲဒီက ပြန်လာမှ ဒါရိုက်တာလုပ် မယ်။ မင်းသားလုပ်မယ်’’ဟု စင် ရော်မောင်မောင်ကပြောသည်။
ဈေးချိုအနီး လုံခြုံရေးယူထားသော ရဲကားတစ်စီးကိုတွေ့ရစဉ်* ဓာတ်ပုံ−ညီညီဇော်)
မန္တလေးမြို့တွင် ဖြစ် ပွားနေသည့် အခြေအနေများ ကြောင့် မန္တလေးဈေးချိုတော် ဈေးဖွင့်ချိန်၊ပိတ်ချိန်များ ပြောင်း လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အထက်မြန်မာပြည်၏ ကုန် စည်အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာ အချက်အချာကျသည့် မန္တလေးဈေးချိုတော်တွင် ယခင် နံနက် ၇ နာရီခွဲမှ ညနေ ၄ နာရီခွဲအထိ ဈေးဖွင့်ကာ အရောင်းအ၀ယ်ပြု လုပ်ခဲ့ရာမှ ယနေ့ဇူလိုင် ၅ ရက် မှစတင်ကာ ဈေးဖွင့်ချိန်ကို နံနက် ၈ နာရီသို့လည်းကောင်း၊ ဈေးပိတ်ချိန်ကို ညနေ ၄ နာရီ သို့လည်းကောင်း ပြောင်းလဲကာ ဈေးဖွင့်ချိန် ၁ နာရီလျှော့လိုက် ကြောင်း မန္တလေးဈေးချိုတော် အကျိုးတော်ဆောင် အဖွဲ့ဝင်များ က ပြောသည်။
အဆင့်မြင့် ဈေးချိုတော် အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းမင်းက ‘‘ဈေးချိုထဲကဆိုင်တွေ အခုဖြစ်နေတဲ့ မန္တလေး အနေအထားနဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ပူကြ တာပေါ့။ ဈေးပါထိန်းလို့ အဆင် ပြေပါ့မလားပေါ့။ ဆိုင်ရှင်တွေ ကိုလည်း သေချာရှင်းပြထား တယ်။ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု မရှိကြ ဖို့။ ဈေးဖွင့်ချိန် ပိတ်ချိန် ပြောင်း တာကလည်း ယာယီရက်ပိုင်း လေးပါပဲ။ မကြာခင် အရင်အ တိုင်း ပြန်ဖွင့်သွားမှာပါ’’ ဟု ပြော ကြားသည်။
မန္တလေးဈေးချိုတော်ကဲ့သို့ ပင် တောင်၊ မြောက်တိုက်တန်းကြီးနှင့် မန်းမြန်မာပလာဇာတို့တွင် လည်း ဈေးဖွင့်ချိန် ပိတ်ချိန် ပြောင်းလဲလိုက်ကြောင်း ဆိုင်ခန်း ရှင်များက ပြောသည်။
ပဋိပက္ခများ စတင်ဖြစ်ပွား သည့် ည၏နောက်တစ်နေ့နံနက် ဇူလိုင် ၂ ရက်တွင် မန္တလေးဈေးချို တော်တွင် ဗုံးတွေ့သည်ဆိုသည့် ကောလာဟလများ ပျံ့ခဲ့ပြီး ဗုံး မဟုတ်ဘဲ အမှိုက်ထုပ်သာဖြစ်နေ ခဲ့သော်လည်း ဆိုင်ခန်းအများအ ပြား လာရောက်ဖွင့်လှစ်ခြင်း မရှိ တော့ပေ။
ဇူလိုင် ၃ ရက်တွင်လည်း မန္တလေးဈေးချိုတော်မှ ဆိုင်ခန်း အများစု ပိတ်သိမ်းထားဆဲဖြစ်ပြီး ဇူလိုင် ၄ ရက်တွင် ဥပုသ်နေ့ဖြစ် သဖြင့် ပုံမှန်အတိုင်း ဈေးပိတ်ခဲ့ သည်။ ယနေ့ ဇူလိုင် ၅ ရက်တွင်မူ ဈေးဆိုင်ခန်းအများစု လာရောက် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနေကြကြောင်း ဈေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းမင်းက ပြောသည်။
ဈေးပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ထားသော် လည်း နယ်မှ လာရောက်ဝယ်ယူ သူ မရှိသဖြင့် အရောင်းအ၀ယ်များ လည်း ကျဆင်းနေကြောင်း မန္တလေးဈေးချိုတော်မှ ဆိုင်ရှင် များက ပြောသည်။
‘‘အမှန်ကတော့ ဒီလိုအခါ က ၀ါဝင်ခါနီးဆိုတော့ အရောင်း အ၀ယ်ပါးနေကြပါ။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိမန္တလေးအခြေအနေတွေ ကြောင့် နယ်ဝယ်လက်လည်း မဆင်းတော့ဘူး။ ပိုပြီးအရောင်း အ၀ယ်ကျသွားတာပေါ့’’ ဟု မန္တလေးဈေးချိုတော် မြေညီထပ် မှ အထည်ဆိုင်ရှင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဈေးချိုတော်သို့ ကုန်ဝယ်လာရောက်သူ နည်းပါး ခြင်းကြောင့် ဈေးချိုတော်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ကုန်ပစ္စည်းတင် ပို့သူများ၊ အနှေးယာဉ်လုပ်သား များ၊ ဘတ်စ်ကားလိုင်းဝန်ထမ်း များလည်း အခက်အခဲနှင့် ကြုံ တွေ့နေရကြောင်း ၎င်းတို့က ပြောသည်။
‘‘ဈေးဝယ်မလာတော့ ဘာ ကုန်ပစ္စည်းမှ မပို့ရဘူး။ ဈေးချို လာတဲ့ ကုန်ထမ်းသမားတွေ၊ ထမင်းဖိုးယူလာရတယ်။ မယူ လာရင် ထမင်းငတ်မှာ’’ ဟု မန္တလေးဈေးချိုတော်မှ ကုန်စည် ပို့ဆောင်ပေးသူ ဦးဝင်းက ပြော သည်။
မန္တလေးဈေးချိုတော်မှ ဈေး ဖွင့်ချိန် ပိတ်ချိန် ပြောင်းလဲလိုက် ပြီးနောက် ဈေးချိုတော်နှင့် ဆက် စပ်နေသည့် ရတနာပုံဈေးအပါ အ၀င် ဈေးအချို့လည်း အချိန် စောစွာ ပိတ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အ ပြင် ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းအချို့က လည်း ၀န်ထမ်းများကို အလုပ်ချိန်စောစီးစွာ ဆင်းပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဈေးချိုတော် ၀န်းကျင်မှ ဆိုင်အချို့မှာမူ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချခြင်း မရှိ သေးပေ။